Manosika, manelingelina, mampijaly ny fomba fampiroboroboana ny fitondran-tenan'ny ankizy
Moa ve ankizy zatovo kely fotsiny?
Ny fitondran-tena ara-tsain'ny ankizy ihany no mahomby amin'ny fifandraisana amin'ny hafa
Fitondran-tena tsara - mbola lohahevitra iray manan-danja amin'ny fampianarana?
Manamafy ny fitondrantenan'ny ankizy sy ny fahaiza-manao sosialy - inona no zava-dehibe?
Ny fahaiza-manao ara-tsosialy dia fahaizana tsy maintsy ianaran'ny ankizy voalohany. Tsy misy olona teraka ho toy ny fiarahamonina ara-tsosialy, ka ny fifandraisana sy fitakiana fitondran-tena tsara eo amin'ny fiaraha-monina dia ampahany manan-danja amin'ny fiaraha-mientana sy fanabeazana. Ny fitondran-tena ara-tsain'ny ankizy dia ateraky ny ray aman-dreny sy ny tontolo iainan'ny ankizy.
Mitabataba, manelingelina, mampijaly? Ahoana ny fomba hampiroboroboana ny fitondran-tenan'ny ankizy?
Ao amin'ny fiarahamonintsika dia maniry ny fiaraha-miasa ara-tsosialy sy manorina. Ny olona tsirairay dia andrasana tsy hanaraka ny lalàna, fa amin'ny fitsipika sy ny soatoavina.
Ny fitondran-tena ara-tsosialy ho an'ny ankizy sy ny fahaiza-manao sosialy dia tokony hianatra
Raha tsy izany, dia manana olana amin'ny olona hafa ianao ary lasa lasa vahiny.
Noho izany dia tokony ho tanjona manan-danja ho an'ny ray aman-dreninao ny hampianatra ny zanakao ny fitsipika fototra amin'ny fifandraisana ara-tsosialy. Aorian'izany dia hanampy anao amin'izany asa izany ny andrim-panjakana toy ny gardens sy ny sekoly.
Amin'ny voalohany, ny zaza madinika sy ny zaza dia voafatotra fotsiny. Manao fihetsiketsehana izy ireo ary tsy afaka mamerina ny zavatra ilainy. Ao anatin'izany toe-draharaha izany, ireo mpanabe sy sosiolojista dia miresaka momba ny fitiavan-tanindrazana.
Ho an'ny ankizy dia miova ny tontolo manodidina izao tontolo izao. Saingy tsy misy ifandraisany amin'ny fitiavan-tena izany: ny zazakely dia tsy mbola nahafantatra ny zavatra ilain'ny hafa ary ny tokony hitondrany izany. Ankoatra izany, tsy mbola afaka maneho ny fihetsika nataony sy ny vokany izy ireo. Ohatra, ny zaza roa taona dia matetika tsy mahafantatra fa meloka amin'ny fahadisoana hafa izy. Mbola tsy takatra ihany fa mahatonga ny fanaintainana ho an'ny namany mpilalao izy. Ny feon'ny fieritreretana ara-môraly dia tsy misy amin'izao vanim-potoana izao.
Mba hanatsarana ny zava-misy, ny hoe tsy ampy ny fiteny ho toy ny sehatra sosialy manan-danja indrindra amin'ny fifandraisana. Ny fanabeazana, ny fandrosoana mialoha, ny fihetseham-po ara-pihetseham-po sy ny fiaraha-monina ary ny traikefan'ny tsirairay amin'ny fifampiraharahana amin'ny ankizy sy olon-dehibe hafa dia manampy ny zanakao hampivelatra ny fahaiza-manaony.
Ny fanandramana sy ny fandinihana natao tamin'ny ankizy dia nanaporofo fa tokony hianatra ny fitondran-tena sosialy amin'ny fahazazany.
Tokony hampirisika ny fitondran-tena ara-tsosialy ny ankizy
Ireo ankizy izay mitombo ao amin'ny fisorohana ara-tsosialy dia sarotra ny manonitra ny tsy fahampian'ny fianarana eo amin'ny fiaraha-monina eo amin'ny sehatra sosialy.
Noho izany, zava-dehibe ny fifandraisan'ny zanakao amin'ny ankizy hafa. Ohatra, mamangy antokom-pahaizana iray na manao zavatra miaraka amin'ny fianakaviana mahaleo tena. Ny vokatra fianarana ho an'ny zanakao dia tsara ary afaka manana fifandraisana amin'ny ray aman-dreny hafa koa ianao.
Mitondra anjara biriky manan-danja ihany koa ny lakandrano sy ny zana-pokontany raha ny fampiroboroboana ny fitondran-tena. Ny zanakao dia mihaona amin'ny ankizy maro samihafa any ary mianatra mametraka ny zavatra ilainy ary manapa-kevitra ny hifanandrina amin'ny fifanoherana. Noho izany, ento miaraka amin'ny fikarakarana ara-potoana ny zanakao ary ampio ireo mpanabe mba hanamafy ny fifaneraseran'ny fiaraha-monina amin'ny fisisihana ny fanarahan-dalàna ao an-trano.
Ny fahalalam-pomba sy ny fahalalam-pomba dia anisan'ireo tanjona lehibe indrindra amin'ny fanabeazana ho an'ny taranaka teo aloha. Saingy ireo soatoavina ireo dia mbola manan-danja amin'izao fotoana izao? Eny, zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny fitondran-tena tsara amin'ny ankizy.
Ny marina dia ny fanajana ny hafa ihany koa ny fahalalahana. Ankoatra izany, te-ho sitrana ny rehetra. Noho izany, ny fomba tsara dia mbola lohahevitra iray mikasika ny fahaizan'ny fiaraha-monina sy ny fitondran-tena sosialy.
Raha tianao ny fitondrantena tsara, dia asehoy amin'ny zanakao hatrany am-piandohana izany. Mikasika ny fitondran-tenany, ny ankizy dia mibanjina voalohany ny ray aman-dreniny. "Ny fianarana amin'ny modely" dia ny teny ampiasaina amin'ny teny fanabeazana.
Amporisiho ny zanakao hampiasa fehezanteny toy ny hoe "azafady" ary "misaotra" ary manao izany matetika araka izay azo atao. Azonao atao ny manazava hoe nahoana no zava-dehibe ny mahafantatra sy manaja ny hafa. Satria tsy manaraka ny fitsipika ara-tsosialy ao amin'ny lalao, dia hanamarina izany. Ny fahatsaram-piainana, etsy ankilan'izany, dia afaka manokatra ny vavahadin-drano - sady mazoto miasa sy mitokana.
Ambonin'ny zava-drehetra, ny ankizy dia mila mianatra ny fomba fitondrantena eo amin'ny tenany sy ny olon-dehibe. Mba hanaovana izany, dia tsy maintsy mametraka fitsipika maro izy ireo, toy ny fepetra ara-tsosialy fa tsy tadiavina ny herisetra ara-batana. Ny ankizy madinika dia tsy hahatakatra ny heviny sy ny tanjon'ity fitsipika ity mandra-pahatonga azy ireo hiombom-pihetseham-po amin'ireo "niharan-doza" ary hahatsapa fa izy ireo dia tsy te hovonoina.
Ahoana no itondrako ny zanakao rehefa mamaky zavatra?
Noho izany, raha manandrana manery kilalao ny ankizy, ohatra, dia mila reny ny ray aman-dreninao hiditra an-tsehatra avy hatrany ianao ary hanimba ny toe-javatra. Lazao ny zanakao hiandry na hanana kilalao hafa. Aorian'izay dia tokony hampirisika ny zanakao hamaha ny olana amin'ny fifandimbiasana ara-pahaizana ianao, hitady marimaritra iraisana, na hikatsaka fanampiana amin'ny olon-dehibe.
Raha manangana fitsipika mifandray amin'ny fifandraisana ara-tsosialy ianao, dia tsy maintsy miantoka koa ianao fa tazonina izy ireo. Mandreraka izany, saingy ilaina izany mba hahalalan'ny zanakao ny dikany ary tena mankafy izany. Raha ny fanitsakitsahana ny fitsipika, ohatra, rehefa milalao miaraka amin'ny ankizy hafa ianao, dia tsy maintsy mitandrina. Ny fepetra amin'izany dia mety hoe mety tsy manasa namana mandritra ny fotoana kelikely ny zanakao.
Zava-dehibe ny hanondroanao imbetsaka ny fitondrantena tsy misy herisetra ary hampitombo ny fitondran-tena sy ny fitondran-tena amin'ny fiderana.
Fitandremana tsara ny bitro - biby fiompy
Pejy fanolorana ny tranoben'i Pisa
Nahoana isika no mafana amin'ny sakafo matsiro? ankizy fanontaniana
Travel Country Canada - Ny fitsidihana any andrefan'i Kanada
Miaraka amin'ny ankizy
Geocaching miaraka amin'ny ankizy | Fialam-boly